Hery - Tsiky dia ampy | Serasera.org | 2
Serasera.org takelaka miteny malagasy nandritra ny 15 taona
2014-02-21 @ 09:09 in Serasera.org, Kolotsaina
Koa satria andro natokana ho an'ny tenin-dreny androany (nahoana no androany fotsiny?) dia mba haneho amim-panetren-tena ny ezaka nataon'ny serasera.org mikasika ny fanajana ny tenin-drazana, ny teny malagasy, aho amin'ity lahatsoratra iray ity.
Raha niforona tamin'ny oktobra 1999 ny serasera dia anisan'ny nanentana tao anaty ny hoe fitaovam-pifandraisana amin'ny teny malagasy. Ny teny malagasy sy ny kolotsaina malagasy hatrany no nanentana isaky (tohiny)
Tononkira Malagasy amin'ny Android
2013-09-17 @ 13:56 in Serasera.org
Dia vita soa amantsara omaly alina izany ny Tononkira Malagasy amin'ny android. Afaka mandeha amin'ny telephone sy tablet misy Android rehetra. Ny tononkira ao anatiny dia izay tononkira hita ao amin'ny takelaka tononkira.serasera.org ihany saingy tsy mila connexion izy dia mandeha. Izany hoe azo ampiasaina na any ambanivohitra aza :-p (tohiny)
Akon'ny vakansy 2012
2012-08-17 @ 13:34 in Serasera.org
Tato ho ato aho tsy nanoratra teto. Mbola nisalasala aho hoe hotohizako toy ny taloha ve sa hovaina ny zavatra hosoratana. Matetika mantsy dia zavatra mikasika ahy manokana, ny zavatra ataoko, ny zavatra mahaliana ahy no tena soratako... ary tsy dia nivakiako loha na mahaliana ny hafa na tsia. Amin'izao dia miha betsaka ny mamaky (na mahavaky) ny blaogiko. Misy ny olona tsy fantatro akory, misy ny tsy ho liana mihitsy amin'izay hosoratako, dia nieritreritra aho hoe sao dia tokony hovaina ny zavatra hosoratana sy ny fomba fanoratra azy? Sao dia tokony hovaina ny fiteny sy ny endriny? Dia niverenako novakiana ny lahatsoratra sasany nosoratako toa ity hoe I'd rather be a blogger ity ny eritreritra mandalo (ato) rehetra dia tapakevitra indray aho hoe hotohizana toy ny taloha ihany ny blaogy. Resaka ankapobeny manokana na tsia... misy rahateo ny sokajy azo ametrahana azy. Izay azo raisina dia raisina, izay tsy azo raisina dia raisiko :-)
Toy ny vao omaly
2012-05-17 @ 04:21 in Serasera.org
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Manaraka»